အိုင်စီတီလောက ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်ချင်လျှင် - Myanmar Network
Posted by Tin Nyunt on July 11, 2011 at 14:19
၂၁ ရာ​စု​တွ​င် အတက်အကျ အများ​ဆုံး​အလုပ်ကိုြ​ပ​ပါ​ဆို​လျှ​င် အိုင်စီ​တီေ​လာ​က​ကိုြ​ပ​ရ​မ​ည်ြ​ဖစ် သည်။ လိုက်မ​မီ​သည့်​ န​ည်း​ပ​ညာများ​အသစ်အ​ဆ​န်းများေ ကြာ​င့် အလုပ်အ​ကို​င် အခွ​င့်​အလ​မ်းများေ​ပါများလာ​သည်ဆိုေ​စ ထို​န​ည်း​ပညာ​သစ်များ​ကို သ​င်ေ​ပး​နို​င် သည့် ပညာ​ဌာ​နများ​မေ​ပါ်ေ​ပါ​က် သေးြ​ခ​င်း​က​လ​ည်း လူ​ငယ်များ​အတွ​က် စိ​န်ေ​ခါ်​မှု​အသစ်တစ်ခုြ​ဖစ်လာ သည်။ သို့ေ​သာ် ရှာေ​ဖွေ​လ့​လာ​စရာ​န​ည်း​လ​မ်းေ​ပါ​င်းစုံ​သ​ည့် အွန်လို​င်း​တစ်ခု​လုံး​ကို အသုံးချ ​ခွင့်​ရေ​နြ​ခ​င်း​က လူ​ငယ်များ​အတွက် အခွ​င့်​အလ​မ်း​တစ်ခုြ​ဖစ်လာသ​ည်။
ကွန်ပျူ​တာ​န​ည်း​ပညာ​သည်လ​ည်း ဆက်လ​က် တိုး​ တက်ြေ​ပာ​င်း​လဲေ​န​ဆဲြ​ဖစ်သ​ည်။ တစ်ခု​ကို မ​သုံး​စွဲရေ​သး​မီ အခြား​ပိုေ​ကာ​င်း​သ​ည့် န​ည်း​ပညာ​သစ်များက အစားထိုး​ဝ​င်ေ​ရာ​က်ေ​န​သ​ည်။ အိုင်စီ​တီ​သည် ဆ​င့်​ကဲ​ကျော်​လွှား​မှုများ၊ ခုန်ပျံ​ကျော်​လွှား​မှုများြ​ဖ​စ်ေ​ပါ်​လာ​သ​ည်။ အိုင်စီ​တီ​ဆိုင်ရာ အသ​က်ေ​မွး​လုပ်င​န်းများ​က​လ​ည်း ကျွ​မ်းကျင်မှု​အလို​က်ေ​န​ရာ​ရ​လာြ​ကသ​ည်။ အိုင်စီ​တီေြ​ကာ​င့် အလုပ် အကို​င် အခွ​င့်​အလ​မ်းေ​တွေ​ပါလာြ​ပီး၊ အစွ​မ်ြး​ပနိုင်သလောက် မျ​က်နှာ​ပ​န်းပွ​င့်ြ​က​သ​ည်။ စက်မှု​ခေတ်ြေ​ပာ​င်းေ​တာ်​လှ​န်ေ​ရး​တွ​င် လူေ​တွ လယ်ကွ​င်းများ​မှ စ​က်​ရုံေ​တွ​ဆီ​သို့ေ​ရာက်လာသ​ည်။ ယခု​ခေတ်သ​ည် အိုင်စီ​တီေ​ခ​တ်ြေ​ပာ​င်းေ​တ်ာလှ​န်ေ​ရး​ကာ​လြ​ဖစ်သ​ည်။ စ​က်​ရုံ​အလု​ပ်​ရုံ​မှ​လူများ အိုင်စီ​တီေ​လာ​က​သို့ေ​ရာက်လာ​သ​ည် သို့​​မ​ဟု​တ် စ​က်ရုံ​အလု​ပ်​ရုံများ​တွ​င် အိုင်စီ​တီ​ကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံး ပြု​လာေ​သာေြ​ကာ​င့် လူေ​တွေ​လျှာ့​ချ​လာနိုင်သ​ည့်ေ​ခ​တ်ြ​ဖစ်သွား​သ​ည်။
အိုင်စီ​တီြ​ဖ​င့်​ရပ်တည်မှု​သ​ည်ေ​ခတ်သစ်တွ​င် ခိုင်မာ​သ​ည့် ရပ်တည်မှု​တစ်ခုြ​ဖစ်လာ​သြ​ဖ​င့် လုပ်င​န်း ခွင်တွ​င် အိုင်စီတီ၊ လုပ်သားေ​တွ​လ​ည်း​အိုင်စီ​တီ​ကို တတ်ကျွ​မ်း​ပါ​မှ အလုပ်အ​ကို​င်နှ​င့်ေ​န​ရာ​အတွက် အာမ​ခံချက်ရှိ​လာ​မ​ည်။ လုပ်င​န်း​ခွင်လို​အပ်ချက်အ​ရ အိုင်စီ​တီ​ဆိုင်ရာ အသ​က်ေ​မွး​မှုများ အစဉ်တိုး​တ​က်ြေ​ပာ​င်း​လဲေ​နရ​သ​ည်။
အိုင်စီ​တီေ​ခတ်တွ​င် ထ​မ​င်း​စား​လက်မှတ်သ​ည် အိုင်စီ​တီ​ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တစ်ခု​ခု​မှ သတ်မှ​တ်ေ​ပး အပ်ထား​သ​ည့် ကျွ​မ်းကျင်မှု​ဆိုင်ရာ အသိ​အမှ​တ်ြ​ပု လက်မှ​တ်ြ​ဖစ်သ​ည်။ မည်သ​ည့်​န​ည်း​ပညာေ​တွ ကေ​ရှ့​​တန်း​မှာ​ရှိေ​န​သ​ည်၊ မည်သ​ည့်​ပ​ညာမျိုး​ကိုေ​လ့​လာ​လိုက်စား​ရ​မည်ဆိုြ​ခ​င်း​မှာ သ​တ​င်း​စာ၊ ဂျာ​န​ယ်၊ မ​ဂ္ဂ​ဇ​င်းေ​တွနှ​င့်​လ​ည်း မျ​က်ြေ​ခ​မပြတ်ဖို့​ လို​ပါ​သ​ည်။ န​ည်း​ပညာ​ဆိုင်ရာ ကု​မ္ပဏီများ​တွ​င် မည်သ​ည့် ကု​မ္ပဏီေ​တွ​ကေ​ရှ့​​တန်း​မှာ​ရှိေ​န​သ​ည်၊ ဘာေ​တွ​ထု​တ်ြ​ပီး၊ ဘာေ​တွ​လု​ပ်ေ​န​သ​ည်၊ ငါ​ဘာ​လု​ပ်ထား​ဖို့​​လို​သည်တို့​​ကို မြ​ပ​တ်ေ​လ့​လာေ​န​မှ​သာ အိုင်စီ​တီေ​လာ​က​တွ​င်ေ​နာက်ကျ​မကျန်ခဲ့​မ​ည် ဖြစ်သ​ည်။
အိုင်စီ​တီ​ဆိုင်ရာ လက်မှတ်တစ်ခု​ခု​ကို ရ​ယူေ​တာ့​မည်ဆို​လျှ​င် ထို​လက်မှတ်များ​ကို အသိ​အမှ​တ်ြ​ပု​ထု​တ်ေ​ပးြ​ခ​င်း၊ စစ်ေ​ဆးေ​ပးြ​ခ​င်း​တို့​​ကိုြ​ပု​လု​ပ်ေ​နသ​ည့် CompTIA အဖွဲ့​​အေြ​ကာ​င်းေ​တာ့ အန​ည်း​ဆုံး သိ​ထား​သ​င့်​သ​ည်။ အိုင်စီ​တီြ​ဖ​င့် အသ​က်ေ​မွး​လို​သူ များ​အတွ​က် A+ လက်မှတ်ကို စစ်ဆေး​ထုတ်ေ​ပး​ရာတွ​င် လူ​သိများ​သ​ည်။ အြ​ခား Microsoft မှ​ထု​တ်ေ​ပးသ​ည့် လက်မှတ်များ​မှာ​လ​ည်း ဈေး​ကွက်ဝ​င် အလု​ပ်အကိုင်အ​ခွ​င့်​အလ​မ်း လက်မှတ်များ​ဟု​ဆိုနိုင်သ​ည်။
အိုင်စီ​တီ​ဆိုင်ရာ​လုပ်င​န်း​သ​ည် လ​က်ေ​တွ့​​တတ်မှ လု​ပ်နိုင်သည်ဆိုေ​စ၊ နား​လည်မှု​စစ်ဆေးြ​ပီး ထုတ်ေ​ပးြ​ခ​င်း​ခံထား​ရသ​ည့် လက်မှတ်တ​စ်ေ​စာင်က​လ​ည်း ဘဝ​အတွ​က် အဆုံး​အြ​ဖ​တ်နှ​င့် အခွ​င့်​အလ​မ်း​တစ်ခုြ​ဖစ်သွား​နိုင်ပါ​သ​ည်။ အိုင်စီ​တီ​ဆိုင်ရာ​လက်မှတ်များသ​ည် တစ်ခါ​ကိုင်ထားြ​ပီး တစ်သက်စာ ထိုင်စား​လို့​ရသ​ည့် အသွင်မေ​ဆာင်ပါ။ အြ​မဲ​တန်း renewable လု​ပ်ေ​ပးေ​နရ​သည့်​သေ​ဘာ​ရှိ​သ​ည်။ အထက်တွ​င် ဆို​ခဲ့​သ​လို န​ည်း​ပညာ​သ​ည် အြ​မဲ​တိုး​တ​က်ြေ​ပာ​င်း​လဲေ​န​သြ​ဖ​င့် ယေ​န့ေ​ခတ်အ​စား​ဆုံး​ဟုြေ​ပာေ​န​သ​ည့် န​ည်း​ပညာ​တစ်ခု​သ​ည်ေ​နာက်သုံး​နှစ်တွ​င် ပျော​က်ေ​ကာ​င်း ပျောက်သွား​နိုင်သ​ည်။ အေ​တွ့​​အြ​ကုံ​သ​ည် တန်ဖိုးြ​ဖ​တ်​၍​မ​ရနိုင်ဆို​စေ လုပ်င​န်း​ခွ​င်နှ​င့် အံ​ဝင်ခွ​င် ကျ​ မြ​ဖစ်သ​ည့် လက်မှတ်များ၊ န​ည်း​ပ​ညာများ​ကို အသိ​အမှ​တ်ြ​ပု​ရ​န်ေ​တာ့ ခက်ခဲ​လိ​မ့်​မ​ည်။
ေ​ခ​တ်ေ​ပါ် အိုင်စီ​တီ​ဆိုင်ရာ လုပ်င​န်း​ခွ​င်နှ​င့် အသ​င့်လျော်​ဆုံးြ​ဖစ်မ​ည့် လက်မှတ်သ​ည် သိ​ပ်ြ​ပီး များများ​စားစား​မ​ရှိ​ပါ။ နယ်ပယ်သုံး​ခု​သာ​ရှိ​သ​ည်။
၁။ CompTIA A+ လက်မှတ်သ​ည် အိုင်စီ​တီ အသ​က်ေ​မွး​ဝ​မ်းကျော​င်း​လုပ်င​န်း လု​ပ်ေ​ဆာင်လို သူများအတွ​က်ြ​ပင်ဆင်ထိ​န်း​သိ​မ်ြး​ခ​င်း ဆိုင်ရာ ကျွ​မ်းကျင်မှု​ကို အသိ​အမှ​တ်ြ​ပု ထု​တ်ေ​ပး​သ​ည့် လက်မှ​တ်ြ​ဖစ်သ​ည်။ ဤ လက်မှတ်ပိုင်ဆိုင်ရန်အ​တွ​က် တတ်ကျွ​မ်း ရ​မ​ည့်​နယ်ပယ်များ​မှာ ကွန်ပျူ​တာနှ​င့် အြ​ခား​ဆက်စ​ပ် ပ​စ္စ​ည်းများ​ကို networking, troubleshooting, maintenance နှ​င့် installation ဟုေ​ခါ်ေ​သာ (ချိတ်ဆ​က်၊ အေြ​ဖ​ရှာ၊ြ​ပင်ဆ​င်၊ြ​ဖ​ည့်​သွ​င်း) နယ်ပ​ယ်ေ​လး​ရ​ပ်တွ​င် အန​ည်း​ဆုံး ကျွ​မ်းကျင်ရ​မ​ည်ြ​ဖစ်သ​ည်။ မိမိ customer နှ​င့် အြ​မဲ ထိေ​တွ့​​ဆက်ဆံေ​နရ​မ​ည့် အလုပ်ဖြ​စ်ြ​ပီး ထိေ​ရာ​က်ေ​သာ​ဝ​န်ေ​ဆာင်မှု​နှ​င့်၊ တိကျေ​သာ အေြ​ဖ​ရှာြ​ပနိုင်မှု​တို့​​သ​ည် လုပ်င​န်း ခွင်အ​တွ​က် အေ​ထာက်အ​ကူြ​ပုနိုင်ပါ လိ​မ့်​မ​ည်။
၂။ MCITP (Microsoft Certified IT Professional) လက်မှတ်ကို​င်ေ​ဆာင်ထား​သူ​တ​စ် ယောက်သ​ည် အိုင်စီ​တီ​ဆိုင်ရာ နယ်ပ​ယ်ေ​ပါ​င်း အေ​တ်ာများများ​တွ​င် လူ​တွင်ကျ​ယ်ြ​ဖ​စ်နိုင်ပါ​သ​ည်။ Server administration, database development နှ​င့် database administration လုပ်င​န်းများ​ကို ကိုင်တွ​ယ်ေ​ဆာ​င်​ရွ​က်ရ​မ​ည်ြ​ဖစ်သြ​ဖ​င့် အေ​ရး​ပါသည်ဟု ဆို​ရြ​ခ​င်ြး​ဖစ်သ​ည်။
၃။ CCNA (Cisco Certified Network Association) လက်မှတ်သ​ည် ကု​မ္ပဏီြ​ကီးများ၊ လုပ်င​န်း ကြီးများ​၏ network နှ​င့် website များ​ကို ကိုင်တွ​ယ် ထိ​န်း​သိ​မ်း​ရသ​ည့် ပညာ​ရ​ပ်များ​ကို အသိ​အမှတ်ြ​ပုေ​ပးေ​သာ လက်မှတ်များြ​ဖစ်သ​ည်။ လက်ရှိေ​ဈး​ကွက်တွ​င် အခက်ဆုံး၊ေ​ဈး​အြ​ကီး​ဆုံး၊ အော​င်ြ​မင်ခက်ခဲ​သ​ည့် လက်မှ​တ်များ​အြ​ဖ​စ် နာမ​ည်ြ​ကီးေ​သ်ာလ​ည်း၊ ထိုလက်မှတ်ကို​င်ေ​ဆာင်ထား​သူ​တ​စ်ေ​ယာက်သ​ည် က​မ္ဘာ့​အလယ်တွင်ပါ မျ​က်နှာ​ပွ​င့်နိုင်သူြ​ဖစ်ပါ​သ​ည်။
အိုင်စီ​တီေ​လာ​က​တွ​င် ထူး​ကဲ​စွာ​နား​လည်တ​တ် ကျွ​မ်း​သူ​တ​စ်ေ​ယာက်အြ​ဖ​စ် အစွ​မ်ြး​ပ​လို​လျှ​င် စာ​ဖတ်ပါ​ဟု တိုက်တွ​န်းချင်ပါ​သ​ည်။ အိုင်တီ​ဆိုင်ရာ စာေ​စာ​င်၊ ဂျာ​န​ယ်၊ မ​ဂ္ဂ​ဇ​င်းေ​တွ လှို​င်ေ​ဘာ​လ​ည်ေ​ပါြ​ကွယ်သ​ည့်ေ​ခ​တ်ြ​ဖစ်ပါ​သ​ည်။ မြ​ပ​တ်ေ​လ့​လြာ​ခ​င်း​သ​ည် ဓား​ကို မြ​ပ​တ်ေ​သွးေ​နြ​ခ​င်း​သာြ​ဖစ် သည်။ အပိုင်ခုတ်ရ​မ​ည့်​အချိန်တွ​င် တုံးေ​သာ​ဓားြ​ဖ​င့် ခရီး မေ​ရာ​က်နိုင်ပါ။
စာ​အုပ်စာ​နယ်ဇ​င်းများ​ကို မေ​လ့​လာနိုင်လျှင်ပ​င် အင်တာ​နက်တွ​င် အချိ​န်ေ​ပးြ​ပီးေ​လ့​လာနို​င်ေ​အာ​င်ြ​ကိုး​စား​သ​င့်​ပါ​သ​ည်။ အိုင်စီ​တီ​ဆိုင်ရာေ​ဝါ​ဟာ​ရ၊ အဓိ​ပ္ပာ​ယ်၊ အသုံး​အနှု​န်းများ​ကိုြ​မန်မာ​လို​ခူး​ခ​ပ်ြ​ပီးြေ​ကွး​ထား​သည်ကို စား​သုံး​ရြ​ခ​င်း​ထ​က်၊ အဂ​င်္လိပ်လိုေ​လ့​လာ​ဖတ်မှ​တ်ြ​ခ​င်း​အား ဦးစားေ​ပး​သ​င့်​ပါ​သည်။ က​မ္ဘာ့​အဆ​င့်​သို့​ တက်လှ​မ်းေ​နြ​ခ​င်း​ဟု သေ​ဘာေ​ပါ​က်လျှ​င် က​မ္ဘာ့​အြ​မ​င်နှ​င့်ြ​က​ည့်နို​င်ေ​စ​ရ​န် အား​ထုတ်ရမည်သာြ​ဖစ်သ​ည်။
Comment by May Myat Swe on November 19, 2012 at 12:01
I want to do the course in Database. Could anyone tell me about which training centre in Yangon I can study MCITP (Microsoft Certified IT Professional) on weekends with fair price?
Comment by Ko tet on October 20, 2012 at 21:19
If I will work in Myanmar,so,will I need to get CCNA certificate?I have finished CCNA Course.please,advice me.
Comment by Ko tet on October 20, 2012 at 21:18
Comment by Zaw Min Tun on April 11, 2012 at 10:32
Very good post . Thanks you so much !
Comment by Zaw Win on April 10, 2012 at 9:44
I would like to thank you very much for your kindness.
May you be happy, healthy and wealthy in Happy Myanmar New Year!
Comment by Aung Pyae on December 4, 2011 at 9:28
ကျွန်တော်က အခု Graphic designer သင်တန်းတက်နေပါတယ်
ကျွန်တော်က design ဆွဲရတာဝါသနာပါပါတယ်
ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့Graphic designer ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုလဲ ဘာသင်တန်းတွေထပ်တက်ရမလဲ
ဘာဘွဲ့တွေလိုလဲ ITလောကမှာ Graphic designer တစ်ယောက်အနေနဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင်အလမ်းတွေရှိလားသိချင်ပါတယ်
Comment by hsu wai naing on October 22, 2011 at 10:10
Comment by Yin Mon Aung on October 20, 2011 at 11:58
Comment by winzawlatt on August 8, 2011 at 15:33
Thank you very much for your explanation on this topic.
Comment by aungpetun on August 7, 2011 at 17:08
အရမ်းကောင်းပါတယ်ဗျာ ။နောက်ထပ် web developer ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလေ့လာ သင်ယူသွားရမလဲဆိုတာ ပြောပြပါအုံးဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊